Fasax iskaa ah: waa maxay, yaa codsan kara iyo sidee | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Fasax iskaa ah
Markii aad muddo dheer ka wada shaqeyneysay isla shaqo, mararka qaarkood xirashada iyo jeexjeexa ayaa kaa dhigaya inaadan ku soo bandhigin sida ugu fiican. In kasta oo ay jiraan ciidaha soo-kabashada iyo dib-u-buuxinta, waxaa jira shax kale oo aan dad badani aqoon, laakiin taasi waxay noqon kartaa mid xiiso leh in laga fiirsado Waxaan ka hadlaynaa fasax iskaa wax u qabso ah.
Laakiin, Waa maxay fasaxa ikhtiyaariga ah ee maqnaanshaha? Xuquuqdee ayaad leedahay? Ayaa dalban kara? Sidee u dalbataa? Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato shaxdan lagu fekerayo Sharciga Shaqaalaha, iyo sidoo kale sharciyada kale, halkan waxaan kaaga sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan.
1 Waa maxay fasax ikhtiyaari ah
2 Ayaa codsan kara fasax iskaa ah
3 Sida loo codsado fasax iskaa ah oo maqnaansho ah
4 Ku noqo shaqada
5 Sida loo codsado dib ugu soo noqoshada shirkadda
Waa maxay fasax ikhtiyaari ah
Si loo qeexo fasaxa ikhtiyaariga ah, waa inaan marka hore tagnaa qodobka 46 ee Sharciga Shaqaalaha, ama ET, halkaasoo soo socota lagu sheegay:
"1. Fasaxa maqnaashaha wuxuu noqon karaa mid ikhtiyaari ah ama qasab ah. Waajibka, kaas oo xaq u siinaya sii haynta jagada iyo xisaabinta dhererka ay ansax tahay, waxaa lagu bixin doonaa magacaabista ama doorashada jago dowladeed taas oo ka dhigaysa mid aan macquul aheyn in laga qayb galo shaqada. Dib u soo celinta waa in la codsadaa bil gudaheeda ka dib marka la joojiyo xafiiska dadweynaha.
2. Qofka shaqaalaha ah ee ugu yaraan hal sano ka saraynaya shirkadda wuxuu xaq u leeyahay in loo aqoonsado suurtagalnimada qaadashada fasaxa iskaa wax u qabso ah ee aan ka yarayn afar bilood oo aan ka badnayn shan sano. Xuquuqdaan waxaa kaliya oo uu isticmaali karaa isla isla isla shaqaalahaas haddii afar sano ay dhaaftay dhamaadkii fasaxii iskaa wax u qabso ee hore.
3. Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin muddo fasax ah oo aan ka badnaan saddex sano si ay u daryeelaan ilmo kasta, marka ay tahay dabeecad ahaan, sida korsashada, ama xaaladaha haynta ee ujeeddada korsashada ama joogtada ah daryeelka korinta, tirinta laga bilaabo taariikhda dhalashada ama, meeshii ku habboon, laga bilaabo go'aanka garsoorka ama maamulka.
Shaqaalaha si ay u daryeelaan qof ehel ah illaa heerka labaad ee is afgarad la’aan ama isku xirnaan waxay sidoo kale xaq u leeyihiin inay helaan muddo fasax ah, oo aan ka badnaan doonin laba sano, haddii aan muddo dheer lagu dhisin gorgortan wadareed, marka loo eego sababaha da'da, shilka , jirro ama naafonimo isagu iskama celin karo, mana fulinayo waxqabad lacag leh.
Fasaxa maqnaanshaha qaybtan, mudadaas oo lagu raaxeysan karo qaab jajab ah, ayaa ka dhigan xuquuqda shaqsiyadeed ee shaqaalaha, ragga iyo dumarka. Si kastaba ha noqotee, haddii laba ama in ka badan oo shaqaale isku shirkad ahi ay xuquuqdan ka soo saaraan isla isla sababaha, loo-shaqeeyaha ayaa xaddidi kara leyliskiisa isla mar ahaantaana sababo macquul ah oo ay ku shaqeyso shirkadda darteed
Marka maaddo cusub oo sababa ay xaq u siiso muddo cusub oo fasax ah, bilawga isla wuxuu dhammeeyaa kan haddii, lagu dabaqi karo, uu ku raaxeysanayay.
Muddada uu shaqaaluhu ku sii maqnaanayo fasaxa iyadoo la raacayo qodobbada qodobkan waxaa lagu xisaabtami doonaa ujeeddooyinka waayeelka shaqaaluhuna wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb galo koorsooyinka tababarka xirfadeed, ka-qaybgalkiisa oo loo baahan yahay loo-shaqeeyaha, gaar ahaan iyadoo dib loogu soo celiyay. Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya waxaad xaq u yeelan doontaa inaad keydiso shaqadaada. Muddadan ka dib, sii qabsashada waxaa loo gudbin doonaa shaqo isla koox xirfadlayaal ah ama isku mid u dhiganta.
Si kastaba ha noqotee, marka qofka shaqeeya uu ka mid yahay qoys loo aqoonsan yahay qoys ballaaran, boos celinta shaqadooda waa la kordhin doonaa ugu badnaan shan iyo toban bilood marka laga hadlayo qoys weyn oo ka mid ah qaybaha guud, iyo ilaa ugu badnaan ee siddeed iyo toban bilood ah haddii ay tahay qayb gaar ah. Marka qofku ku dhaqmo xuquuqdan isla mudada iyo xukunka waalidka kale, sii qabsashada shaqada waxaa loo kordhin doonaa ugu badnaan sideed iyo toban bilood.
4. Sidoo kale, shaqaalaha jimicsiga heer gobol ama mid sare ka shaqeeya inta lagu jiro jimicsiga booskooda wakiilnimo waxay codsan karaan in loo gudbiyo xaaladda fasaxa maqnaanshaha ee shirkadda.
5. Shaqaalaha fasaxa iskaa wax u qabso ah wuxuu hayaa kaliya hal xuquuqo mudnaan ah inuu dib ugu soo celiyo boosas banaan oo isku mid ah ama la mid ah kiisa oo ka jira ama ka dhaca shirkadda.
6. Xaaladda fasaxa maqnaanshaha waxaa loo kordhin karaa dacwado kale oo si wada jir ah loogu heshiiyey, iyada oo xukunka iyo saamaynta ay ku leedahay halkaas.
Iyada oo ku saleysan kor ku xusan, waxaan awoodnaa u qeexaa fasaxa ikhtiyaariga ah xaalad uu shaqaaluhu ka codsado laalista heshiiska shaqada shirkadiisa. Sidan oo kale, xitaa shaqaaluhu ma aha inuu shaqo tago. Sidoo kale shirkada ma ahan inay siiso mushaarkiisa, ama xitaa wax ugu darsato.
Maaddaama ay tahay ikhtiyaari, waxay muujineysaa inay tahay shaqaalaha codsanaya, sabab kasta ha noqotee, iyada oo aan sharraxaad laga siinin shirkadda. Waa haddii ay ku timid iimaan wanaagsan.
Dabcan, tani waxay leedahay raadad dhowr ah oo ay tahay in lagu xisaabtamo.
Ayaa codsan kara fasax iskaa ah
Si aad u awoodo inaad codsato fasax iskaa ah waa lagama maarmaan in taxane ah shuruudaha kuwaas oo:
In aad shirkadda kula leedahay heshiis shaqo.
Taasi waxay leedahay ugu yaraan hal sano.
Ma codsanin fasax iskaa wax u qabso ah afartii sano ee la soo dhaafay.
Haddii waxaas oo dhan la dhammeeyo, waxaad bilaabi kartaa waraaqaha. Waa in la tixgeliyaa, sida lagu sheegay ET, in tani ay noqon doonto ugu yaraan afar bilood iyo ugu badnaan shan sano.
Dhab ahaan, ET waxay dejisaa habab kala duwan oo nooca fasaxa maqnaanshaha ah. Laakiin macnaheedu maaha in xaaladahaas oo keliya la codsan karo. Xaqiiqdii, waa la dalban karaa sabab kasta ha noqotee iyada oo aan loo sharraxin shirkadda lafteeda.
Sida loo codsado fasax iskaa ah oo maqnaansho ah
Haddii wixii aad akhriday ka dib aad u malaynayso inay tahay waxa aad u baahan tahay inaad sameyso, waxaa lagama maarmaan ah inaad ogaato waxa ay yihiin tallaabooyinka ay tahay inaad qaaddo si aad u codsato fasax iskaa wax u qabso ah
Xaaladdan oo kale, Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waxay noqon doontaa in warqad laga qoro shaqaalaha halkaasoo uu kala hadlayo shirkadda isticmaalka xuquuqda fasaxa iskaa wax u qabso ee ikhtiyaariga ah. Dukumentigan ayaan loo baahnayn in lagu caddeeyo sababaha kugu horseedaya tan. Laakiin waxaa jira muddo, labadaba bilowga iyo dhammaadka. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad ogaataa haddii uu jiro ugu yaraan muddada ogeysiiska ee ku xusan Heshiiska Wadajirka ah. Haddayna jirin, waa in loogu wargaliyaa shirkadda sida ugu dhakhsaha badan si ay uga jawaabi karto (si tab ah ama taban) codsigaas.
Xaaladdan oo kale, waxaad ka heli kartaa laba fikradood:
Shirkadu way aqbashaa xaqaaga. Xaaladdan oo kale, marka taariikhda aad go'aamisay sida bilowgu u yimaado, xiriirka shaqada waa la hakinayaa, taas oo aan jabin. Waqtiga ka dib, illaa iyo inta aysan ka badnayn shan sano, waxaad awoodi doontaa inaad dib u la midowdo mar kasta oo ay banaan yihiin.
Shirkadu aqbali mayso xaqaaga. Waa inaad dacwad ku soo oogtaa jabinta xuquuqda iyo, ilaa iyo inta laga helayo go'aan xaddidan oo garsoor, waa inaad sii wadataa shaqada. Xaaladahaas oo kale, shaqaale badan ayaa aakhirka weydiista cayrin iskaa wax u qabso ah marka aysan macquul aheyn in la is waafajiyo dhibaatada keentay fasaxa iskaa wax u qabso ee maalinta shaqada.
Sinnaba sinaba shaqaaluhu uma joojin karo inuu aado shaqadiisa, maxaa yeelay haduu sidaas sameeyo, shirkadu way eryi kartaa iyadoo laga tagayo shaqada. Haddii shirkaddu aysan ka jawaabin codsiga, sida kiiska aqbalaadda, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la dacweeyo oo la sugo natiijada tan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ka ogaato fasaxa ikhtiyaariga ah ayaa ah, haddii aad weydiisato, shirkadda waajib kuma aha inay kuu xafido shaqadaada. Si kale haddii loo dhigo, markaad rabto inaad ku laabato shirkadda maahan inay ku siiso isla shaqadii aad horay u qabatay. Dhab ahaantii, waxaad heli doontaa waa xaq kaliya dib u soo galid. Waa maxay tan? Hagaag, hadii ay jirto boos banaan boos lamid ah ama lamid ah, way ku siin doonaan.
Hadda, taasi macnaheedu maahan in, Heshiis Wadareed, ama xeerar kale oo xukuma maamulka shirkadda, astaamo kale lama dhisi karo. Tusaale ahaan, haddii ay jirto boos celin boos xaddidan, oo tan ka dib ay tahay uun doorbid dib-u-soo-galid.
Sida loo codsado dib ugu soo noqoshada shirkadda
Maadaama shan sano aan laga soo bixin tan iyo fasaxa iskaa wax u qabso, shaqaaluhu wuxuu ka codsan karaa shirkadda, qoraal ahaan, inuu ku codsado dib ugu soo noqoshada shaqada.
La Shirkaddu waa inay daraasad ku sameysaa codsigan, iyadoo daraaseynaysa shaqooyinka banaan ee jiri kara kana jawaabi doonta codsigaas. Tan waxaa lagu talinayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo, gaar ahaan tan iyo markii ay ku dhowdahay dhammaadka ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ka sii xumaan doonta.
Marka laga hadlayo jawaabta shirkadda, waxaad isku arki kartaa fursado badan:
Taasi jawaab kama bixinayso: Waa inaad dacwad ka gudbisaa xuquuqdaada dib u soo galida (taas oo aan laga qayb galin), iyo sidoo kale cayrin. Ujeeddooyinka sharciga ah, xaqiiqda ah in shirkaddu aysan ku soo jawaabin muddo cayiman gudahood waxay u dhigantaa shaqo ka eryis, waana lagama maarmaan in la soo sheego.
Aqbal codsiga: Shirkaddu waxay siin doontaa shaqaalaha shaqo isku mid ah ama isku mid ah shaqaaluhuna wuu aqbali karaa ama diidi karaa. Haddii aad aqbasho, waad ku noqon kartaa shaqada; haddii kale, markaa waxay la mid tahay inuu macasalaamayey (haddii wixii loo soo bandhigey aysan isku mid ahayn ama isku mid ahayn).
Ma aqbalayo arjiga laakiin ma diidayo dib u soo celinta: Tani waxay badanaa dhacdaa marka shirkaduhu aysan lahayn boosas banaan waqtiyadaas. Oo sidaas darteed, shaqaaluhu dib ugama mid noqon karo. Waa inaad sugto in mudo ah si aad dib ugu codsato dib u soo galida.
Ha aqbalin dalabka oo ma rabto dib u soo galid: Waxay u qalantaa xil ka qaadis, sidaas darteedna shirkadda waa la dacweyn karaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Fasax iskaa ah
Waa maxay ujeeddada shaqada laga ceyrinayo
Qorshaha hawlgabka: sida uu u shaqeeyo